Start with K to O – HlaMin
Category: Start with K to O
Early MIT Alumni
Update : November 19, 2021 Dr. Freddie Ba Hli (Electrical Engineering, GBNF)Served as Director General of UBARI and Advisor at National PlanningMoved to Australia Dr. Ronald Findlay (Economics, GBNF)Retired as Dean, Columbia University U Sein Hlaing (Electrical Engineering, GBNF)Retired as Professor and Head of RIT EE Department Dr. […]
by Ko Ko Kyi Twinkle twinkle little Kyel Sin,Watching above from so high. Wondering how things are,Worrying about her Gen Z friends. Fighting for democracy and liberty,To be free from all tyranny. Don’t you worry dear Angel,One so young and yet so brave. Everything will be alright. ကြယ်စင်လေးသို့ […]
Kabar Ma Kye Bu
ကမ္ဘာမကြေဘူး We will Not Forgive and Forget Atrocities of the Power Mongers till the End of Time / World The evil that men do lives after them . Those terrorists power mongers must pay back for their misdeeds.
Democratically Elected Representatives are being Kidnapped by Terrorists CowardsLiars Thugs CRPH and NUGare the Legitimate Voices of the Courageous People
Malicious DSA Alumni
Credit : Ko Ko Kyi အောင်စစ်သည်တို့ေဗြာင်ညစ်ပြီ နောင်တစ်ခေတ်၏ အောင်စစ်သည်ဒီခေတ်မှာတော့ ဗြောင်ညစ်ပြီ။ဂုဏ်သိက္ခာမဲ့ စစ်ဗိုလ်များပြည်သူများကို ဖိနှိပ်ထား။စစ်ကေျာင်းကြီးမှာ သင်ခဲ့သည်ဂတိသစ္စာ တည်ရမည်။ဂတိလည်းပေျာက် သစ္စာဖေါက်တစ်တိုင်းပြည်လံုး ဒုက္ခရောက်။နိုင်ငဲအာဏာ သိမ်းလို့ယူအဓမ္မနဲ့ အုပ်ချုပ်သူ။မင်းဆိုးမင်းညစ် တွန်းလှန်ဘို့တပ်မတော်သစ် ဖွဲ့ကြစို့။ မှတ်ချက်၊ “နောင်တစ်ခေတ်၏အောင်စစ်သည်”ဆိုသည်မှာ စစ်တက္ကသိုလ်၏ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ Notes Brigadier Maung Maung (who negotiated the 1958 Soft Coup) is credited with the project for establishing Military Training Schools in Ba Htoo and Maymyo. Colonel […]
Ko Thein (Tokyo) : 1
ဂျပန် မှာ ကြုံရပုံ။ (၁၂-၁၀-၂၀၂၁)အင်္ဂါနေ့မနက် အိမ်ကအထွက် လက်ကိုင်ဖုံးလေးကိုထားနေကျနေရာမှာမရှိလို့ရှာမိသည်။ မတွေ့။ မနေ့ကစာတိုက်ကိုခဏသွားသည်။ တခြားဘယ်မှာမှမဝင်ခဲ့။ ဒါကြောင့်စာတိုက်မှာမေ့မှာပဲဆိုပြီးစာတိုက်သွားလိုက်သည်။ စာတိုက်မှာကလူအပြည့်။ ဝန်ထမ်းအားလုံးအလုပ်များနေကြသည်။ ကိုယ်ဖါသာဟိုရှာဒီရှာ ရှာနေစဉ် မန်နေဂျာကထွက်လာပြီး ” သိန်းစံရဲ့တယ်လီဖုံးလေးမနေ့ကတွေ့တယ်။ စစ်ကြည့်တော့သိန်းစံရဲ့ဖုံးမှန်းသိပါတယ်။ ပြန်လာပြီးယူမလားလို့ညနေထိစောင့်တယ်။မေ့တဲ့ပစ္စည်းကိုဒီစာတိုက်မှာသိမ်းထားခွင့်မရှိလို့ ကိုးဘန်း (ရပ်ကွက်ရဲကင်း) ကိုအပ်လိုက်ရတယ်။ ကိုဘန်းမှာသွားစုံစမ်း” ပါတဲ့။ တောင်းတောင်းပန်ပန်ပြောရှာသည်။ ဖုံးလေးမပျောက်တော့တာသိလို့ဝမ်းသာရသည်။ ဒါနဲ့လမ်းဒေါင့်ကကိုးဘန်းလေးဆီသွားလိုက်သည်။ အစောင့်ရဲလေးကိုပြောပြတော့ ပစ္စည်းစာရင်းလှန်ကြည့်ပြီး “ဟုတ်တယ်မနေ့ညနေကစာတိုက်ကလာပို့ထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းကိုရက်ကျော်ဒီမှာထားလို့မရလို့ အုရှိဂိုမဲ့ရဲစခန်းကို အပ်လိုက်ပြီ။ အဲ့ဒီသွားယူပါ။ နေရာသိသလား။”တဲ့။”သိပါတယ်။ သွားယူလိုက်ပါမယ်” ဆိုပြီးအုရှိဂိုမဲ့ရဲစခန်းကိုသွားလိုက်သည်။ ရဲစခန်း ပစ္စည်းပျောက်ဌာနမှာသွားမေးတော့ “မင်းပစ္စည်းဒီမှာရှိတာဘယ်လိုသိသလဲ” တဲ့။ ဒီတော့ဖြစ်စဉ်ကိုပြန်ပြောပြရသည်။ ပစ္စည်းပျောက်/ရွေး ပုံစံဖြည့်ရသည်။ ကိုယ်ပိုင် ကဒ်ယူစစ်သည်။ ဖုံးကဘာရောင်။ ဘာနံပါတ်။ […]
By Hla Min (Lifelong Learner) on October 17, 2021 • ( Leaveacomment )
Update : October 17, 2021 Burmese Music The Burmese classify musical instruments as Kyay Kyo Tha Yay Lay Let Khoke Burmese Saing Waing has Jazz asadistant cousin. The musicians perform extemporaneously. Burmese Dobat was common e.g. in Thingyan and Ah Hlu Miscellaneous Philharmonic orchestras have various […]
Looking for Willy Aye
By Hla Min (Lifelong Learner) on October 16, 2021 • ( Leaveacomment )
Update : October 16, 2021 The photo was provided by Ko Benny Tan (M70). Ko Benny remembers that U Willy Aye came back to Burma after studying Civil Engineering in the US in the 50’s. U Willy Aye worked in Burma for some time before heading overseas. Ko […]
Update : October 14, 2021 SPZP-2016 and the YTU Modernization Project Supporters : Ko Kaung Myat Soe (M2003) Ko Moe Myint Ko Kyaw Soe Aung [Per U Wynn Htain Oo (M72)] The three’s company is “Everglory”. They donated for SPZP-2016. They pledged/donated for the Fire Alarm System for […]